ရိုဟင်ဂျာ စနက်တံ နဲ့မြန်မာ အစိုးရ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲ | Freedom News Group
by FNG on June 24, 2012	တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း မှာ အခြေစိုက် တဲ့ မြန်မာ စစ်တပ် က အရ
From: သတင်း ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း	← မြွေလေး
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ( ၂၅.၆.၁၂) မှ ( ၁.၇.၁၂) ထိ တပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း →
Rain Moe	#
အပေါ်ကမျိုးချစ်မျက်ကန်းတွေကို ပြောချင်တယ် အစိုးရပိုင်းရဲ့အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေကိုဖေါ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကိုတောင်လဲပစ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်လား…မင်းတို့ဘင်္ဂါလီတွေကိုပဲမျက်စိစပါးမွေးမစူးနဲ့ ဘင်္ဂါလီမြိုလို့ ဗမာလူမျိုးမပျောက်ဘူး မြန်မာပြည်မှာအစ္စလာမ်လူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်းနဲနဲလေးပဲရှိတယ် အေး ..သတိပေးလိုက်မယ် မင်းတို့အမေ့လင်တွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်တွေမျိုရင်တော့ မင်းတို့မျိုးကန်းပြီသာမှတ်ပေတော့ မျိုးချစ်မျက်ကန်းတို့ရေ…….အခုရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ လားရှိုး၊တောင်ကြီး စတဲ့အထက်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးမှာ မင်းတို့ပထွေးတွေပြည့်နေပြီ..မြန်မာပြည်ရဲ့တရုတ်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ထိစပ်နယ်မြေဟာ ကျယ်ပြန့်မှုအပိုင်းမှာ ဆင်နဲ့ဆိတ်လိုကွာတယ်ဆိုတာလည်း သတိပြုအုံး……….
September 10, 2012	Argar	#
ဘူးသီးတောင်-မောင်တောဒေသမှာ အရေးကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ရခိုင်ဒေသခံဝန်ထမ်းတွေကို ခန့်ထားဖို့နဲ့
ငွေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလှဲလှယ်နေကြသော ပြည်မမှလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကို ကန့်သတ်စီစီ
August 12, 2012	U Aung Naing(Asia Winner Co., Ltd.)	#
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ မေယုခရိုင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ရန်ကုန်ေ၇ာက်ရင် အခက်အခဲမရှိဘို့ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံက မေယုအအေးခန်းစက်ရုံကြီးကိုသွားကြပါ။ အဲဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာ ညီအစ်ကိုတွေအများကြီး။ မေယုကုပ္ပဏီရုံးခန်းက ၄၉လမ်းမှာ အေး၇ှားဝင်းနား၊မေယုရုံးခန်းဆို လူတိုင်းသိပါတယ်။
July 13, 2012	အောင်တင်	#
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောမှာ မွတ်စလင်က ၉၆% ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေရဲ့ ၅၀%က ၉၆% ဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင်တွေဆိုတော့ ကျန်တဲ့အမှုတစ်ဝက်ကို ၄%သာရှိတဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူတွေက ကျူးလွန်တယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လူတွေက ရာဇဝတ်မှုနည်းပြီး ဘယ်လူတွေက ရာဇဝတ်မှု များတယ်ဆိုတာက အရှင်းကြီးဘဲ။
July 3, 2012	Aung	#
ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလေ..ဒီ တရားမ၀င်ဘင်္ဂလီမူဆလင်ခွေးမသားတွေက ကျေးဇူးတင်လေပါခင်ဗျား..မယုံမရှိပါနှင့်ခင်ဗျား..အဲဒီခွေးကောင်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဆီက သိရတာပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
June 27, 2012	Aung	#
ဘင်္ဂလီနယ်ကျော်မူဆလင်ခွေးကုလားစုတ်တွေက ရိုဟင်ဂျာ ဝေါဟာရကို လူမျိုးနာမည် အဖြစ်လိမ်ပြီး ထွင်ထားတာပါ..တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ရခိုင်ပြည်မှပြန်လာတဲ့ကုလား ဖြစ်ကြောင်းကို ဘင်္ဂလားတစ်ကောင် ကပြောဖူးပါတယ်.တရားမ၀င်ဘင်္ဂလီမူဆလင်ကုလား လို့ သုံးပေးကြပါခင်ဗျား..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
June 27, 2012	saynyonthu	#
ဖော်ပြပါ အကြောင်းရာများသည် အမှန်များဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က မောင်တော ကိုရောက်တော့
န.စ.ခ မှာ ကုလားတွေနဲ့ ဂေါက် အတူတူရိုက်ပြီး စီးပွါးရေးဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေ..သူတို့ နစခ ထဲလာရင် တံခါးမရှိဒါးမရှိ အစစ်အဆေး အမေးအမြန်းမရှိ ၀င်ထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကုလားတစ်ယောက်ကို မိန်းမ တစ်ယောက်ပဲ ယူခွင့် ကလေး ၃ ယောက်ပဲ ယူခွင့်ရှိပေမဲ့ ၄ သိန်းပေးရင်တော့ ရတယ်။ သူတို့က လူများစုဖြစ်
June 26, 2012	အလ္လာ့ ရိုဟင်ဂျာ မိုဟာမက်	#
မည်သူမျှလက်မခံ.အကြောင်းဆိုတာနတ္တိ.ကောင်းဖို့ ရာလုံးဝမရှိတော့.ဒို့ မြေကိုတော့လက်မဝက်ပင်ပေးမထိ။
ကိုယ့်မြေလို့ စိတ်မထား.ဖျက်ဆီးမယ့်လူ့ ကပ်ပါးတွေ.သဘောချိုချိုနေရာသာပေးကြည့်.လူမျိုးပင်တုံးနိုင်၏။
ဘာတဲ့..လွပ်လပ်ရေး.ဟုတ်လား…ဟား..ဟား…မြန်မာ့သွေးနဲ့ မြန်မာတွေရေးရတာ.ရာဇဝင်သွားပြန်ကြည့်.ဗမာ၊ကယား၊ကချင်၊များနဲ့ ရှမ်း၊ချင်း၊ကရင်၊မွန်၊ရခိုင်တို့ 
တိုင်းတပါးအကျိူးပေါ်ဖို့ ၊ဘင်္ဂလားပြည်ကအမှိုက်စုတ်ကို.ဘာလို့ ပြည်နယ်ခရိုင်ပေးဖို့ လိုမလဲ.စဉ်းစားကြည့်ပါဦး.အဆိပ်သီးခူးရဖို့ .အဆိပ်ပင်ကိုရေလောင်း၊မြွေပွေးခါးပိုက်ထဲထည့်တဲ့အလုပ်.ဘယ်သူတွေလုပ်ဖို့ကြံနေသလဲ၊။
ပုန်ကန်ဖို့ အချိန်တန်ပြီအထင်နဲ့လူသူလက်နက်ဟန်ပြီဆိုတော့မှ.ဒို့ သွေးကိုလာရန်စတော့.ငြိမ်လို့ သာခံလိုက်ရင်ဖြင့်၊ဒို့သွေးတွေရာဇဝင်ရိုင်းရပြီပေါ့၊ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်၊ဆိုးယုတ်တဲ့ဒင်းတို့အကြံ၊ကူလိကူမာဥာဏ်တွေထုတ်၊မတရားတော့ကုလားဖြစ်ဆိုတဲ့စကား၊အလကားတော့မဟုတ်ပေဘူး။
တကယ်ဆိုမင်းတို့ က အကြမ်းဖက်ပထွေးကိုအားကိုး၊ပြည်ပမီဒီယာကိုသပ်လျှို၊ဒို့အမျိုးကိုဂုတ်သွေးစုပ်၊ဒို့တိုင်းပြည်ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်း၊အရိုးတွင်းကတောင်ယုတ်ကန်းနေတော့၊အေး..မြဲမြဲသာမှတ်.ခေါင်းရင်းနံရံပေါ်အသာကပ်၊ငါ့အဖိုးရဲ့ ကုလားဖြူနဲ့ကုလားကျွန်သတ်ဓါး၊.ဘင်္ဂလီကုလားသွေးဆာနေပြီ.ဒီတော့ဥပဒေဆိုတာအသာထားလို့ .တို့ တရားတို့ ရှာရ၇င်.ကုလားဆိုတာအရုပ်တောင်မထားချင်.အမျိုးဂုဏ်အသရေငြိုးစေမယ့်ဘယ်ကုလားမဆို၊အထာမထားနိုင်ဘုး၊အသားရှစ်ပုံ၊ပုံကာခွေးစာကြွေးပစ်မယ်ပါ့၊ကဲ….သေဖို့သာပြင်ထား၊
June 26, 2012	sayargyisrg4@gmail.com	#
June 26, 2012	sawnanko	#
ဒိလိုပဲ ဆက်ထားရင်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ၀ါးမြိုသွားနိုင်တယ်။ ခက်တာက မြန်မာလူမျိုးတွေက အဲလိုသစ္စာမရှိ ကိုယ့်ကျိုးဘက်ပဲကြည့်နေရင်တော့ ဆက်ဖြစ်အုန်းမှာပဲ။
June 26, 2012	ချိန်တန်ုပြီ	#
ဘာလို့ စိတ်ပူနေတာတုန်း … အထက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကတောင် မြန်မာနိုင်ငံကြီး အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာကို လက်ပိုက်ကြည့်နိုင်သေးတာပဲ … ဒို့များက ဘာကို စိတ်ပူနေရမှာတုန်း … တနိုင်ငံလုံး မွတ်စ် ဖြစ်သွားတော့လဲ အေးတာပဲ … အခုလိုမျိုး ဒေါသဖြစ်စရာတွေ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …
June 27, 2012	ငြိမ်းချမ်းမောင်	#
June 25, 2012	မျိုးမြင့်မျိုး	#
၁) ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ တွေ နဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ်ကျိုးစီး ပွား ရှား ဖွေ မှု တွေ —> ရှိခဲ့ရင် သေချာစိစစ်အရေးယူသင့်ပါတယ်။
၂) ဒေသခံ တွေ ရဲ့ပြဿနာ တွေ ကို ဦးစားမပေး မှု တွေ —> မှန်တဲ့လူဖက်ကိုသာ ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်၊ ဒေသခံဖြစ်တာနဲ့ ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမမှန်ပါဘူး ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ရခိုင်ဖြစ်တာနဲ့ ခံရတဲ့ဖက်ကချည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိစစ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်အစ်မရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဒီစကားကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
၃) ဘင်္ဂါလီ တွေ ရာဇ၀တ် မှု ကျူးလွန် ခဲ့ တာ တွေ ကို မသိကျိးကျွံ့ ပြု ခဲ့ တာ —> ဒါက လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင် သေချာစိစစ်အရေးယူသင့်ပါတယ်။
June 25, 2012	ချိန်တန်ုပြီ	#
အထက်ကပြောသွားတဲ့ ပုံအရဆိုရင် တော်တော်သိနေပြီပဲ … နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပေးပါ… စစ်တွေမှာ နေတဲ့ ဗမာ မမတစ်ယောက်က ဘာတွေပြောသလဲဆိုတာ… ကျွန်တော်တို့လဲ ဗဟုသုတ ရချင်လို့ပါ …
June 26, 2012	aung	#
ခေါင်မိုးကမလုံတော့ မိုးရဲ့ ဒဏ်ကို ကိုယ်ခံနေရ တာအမှန်ဘဲ ။ ဒါပေမယ့် လဲမိုးရွာတဲ့အကြောင်းကကိုယ် တစ်ယောက်ထဲကြောင့် တော့ မဟုတ်ဘူး။
June 25, 2012	same	#
အဲ့ဒါတော့မိုက်ရိုင်းလွန်းတယ်။သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိစ္စကို ဖော်ထုတ်ကြပါ။ဒါဟာ သူခိုးဒါးရိုး ကမ်းတာထက်ဆိုးသွား နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်
ဆိုရိုဟင်ဂျာတွေကပိုပြီးလူပါးဝပြီး ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်။ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက မြန်မာပြည်ကို အရှက်ခွဲပေါင်းများပြီး။ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာပြည်မှဘာလို့အပြီးမမောင်းထုတ်တာလဲ။သူတို့အမျိုးဘင်္ဂလားတွေတောင် သူတို့အကြောင်းသိလို့လက်မခံဘူး
June 25, 2012	SZ	#
Now only when the riot happened that all blamed each side. Normally, for business purposes, Rakhine worked with Bengali and Bengali has military partners, Na-Sa-Ka and so on. The racial politics only happend with the poor. But as the country is poor, there r more poor than rich so that kind of thing(Riot) happened. If all r rich, no one will do such thing(Riot)
So make rich first and control the border strictly with rule of law and political will, Rakhine problems will be solved.
June 25, 2012	Mg Aung Win	#
June 24, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,521,578 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearMyanmar refugees face land challenges on returnMyanmar gives relief to CebuMyanmar president visits northern CebuMyanmar President cites Pinoy resiliencyWant Burma info in your inbox each morning?